नीलकण्ठ सुवेदी, Author at साहित्यपोस्ट | Page 293 of 299
आजभोलि समय पनि अन्धकार भएको छ पलपलको समाचार तीखो प्रहार भएको छ चौबिसै घण्टा भगवानको नाम जप्न पर्दा जतन गरेको जिन्दगी पनि करार भएको छ मातृभूमिको सम्झनाले त झनै सताइरह्यो सकिन्न तर्न लकडाउन ठूलो जंघार भएको छ तार आउँछ…
उषा रश्मि पाण्डेय शब्द नै गाली शब्द नै ताली शब्द नै बिख शब्द नै अमृत प्याली । शब्दले नै कोही हर्छन् पीर शब्दले नै कोही हान्छन् तीर । शब्दकै कारणले भए कति युद्ध शब्द ज्ञानका सुनेर भए कति बुद्ध । शब्द प्रेमको…
तुफानी धुँवाको मुस्लोमा रनभुल्ल, व्यग्र व्यस्त त्यो बादशाह आज अनायास टक्क अडिएको छ ठीक बाह्र बजेको घडीको सुई झैँ शान्त ! अनेक सृष्टि र विनाशका बेपर्वाह धुँवाको मुस्लोलाई जितेको त्यो आज कछुवाले झैं शरीर लुकाएको छ मुख छोपेको छ नाक…
जीवित छैनन् सपनाहरु
मरिसकेको छ कहाँ भेटिन्छ खोजेर आफैँले नभेटाएको हो त्यसैले खोजेको हुँ कारणहरु छन् खोज्नुको कहीँकतै हुनुपर्छ प्रमाणका ठेलीहरु लुकेर बसेको थाहा हुन्छ ल्याबमा टेस्ट गरेपछि कसै न कसैसँग त मेरो सपनाको डिएनए मिल्ला नि…
अध्यात्मिकता र पुस्तकमा प्रेमशास्त्र
अञ्जना पौडेल अनुश्रुति प्रेम एउटा यस्तो अमृत हो, जस्मा भावनाको मिठास घोलिएको हुन्छ । भावना बिनाको प्रेम मृत प्रायः हुन्छ । जुन कुरा केवल महसुस गर्न सकिन्छ, देख्न, छुन सकिँदैन, त्यो नै प्रेम हो । प्रेम अन्तरआत्माको आवाज हो । देखेका,…
प्रवासीलाई नेपालसँग जोड्ने धागो नेपाली साहित्य नै हो – जीबा लामिछाने
'सरसर्ती संसार' (यात्रा संस्मरण)का लेखक तथा प्रवासी नेपाली अभियन्ता जीबा लामिछानेले प्रवासीलाई नेपालसँग जोड्ने धागो नेपाली साहित्य नै हो भनेका छन् । बुकाहोलिक्सले आयोजना गरेको स्रष्टासँग साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै लामिछानेले प्रवासी…
गुरु घृणा गरुन् भैगो म गर्छु पूर्ण आदर गुरु ज्ञान नबाँडून् भो म लिन्छु ज्ञान सागर । म निषाद भएँ के भो मेरो चेत छ क्षेत्रीय म निषाद भएँ के भो मेरो चेत छ ब्राह्मण । के मैले पढ्न मिल्दैन ज्ञान सिक्न हुँदैन र ? ठूलो स्वप्न…
ब्याट्री सकिन लागेको भित्ते घडी र म
गाढा नीलो पानीको मेलोडी भुलेर म चुपचाप हिन्द महासागरको डिलमा आफैँ ढलेको हेरिरहेछु । हिउँदको म्यापल ट्री झैँ खङ्ग्रङ ठडिएका आइफल टावर, बुर्ज खलिफाहरु हेर्दा लाग्छ उभिएका सबैसँग जीवन नहुन सक्छ । अक्षर नगोडेकी बुढी…
विश्वव्याधि उधिन्ने उपन्यास
जेन सियाबेटारी अहिले हामी जस्तो अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छौँ, यस्तो अवस्था आउला भनेर कसैले पनि कल्पिएको थिएन । तर पख्नुस्, साहित्यकारहरूले चाहिँ कल्पेका थिए । त्यसबारे पछि कुरा गराैँला तर अहिले त हामी भयमा छाैँ । के होला र कसो होला, आफ्नो…
उमेश थापा उमेर लामो हुँदैछ जीवन छोटो हुँदैछ, मेरा हरेक कथाहरुले नयाँ मोड लिँदैछ। थाहै थिएन, हिजोसम्म तिमी मेरो हुन्नौ भन्ने, आजबाट मन मेरो बिछोडले रूँदैछ । कोमल मनलाई चोटरूपि काँडाहरुले छुँदैछ, चिथ्रा-चिथ्रा पारिकन रगतले धुँदैछ।…
अघिल्लो 1 … 291 292 293 294 295 … 299 पछिल्लो